I-High-Pressure Mechanical SSiC Seal Ceramic Ring China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > I-High-Pressure Mechanical SSiC Seal Ceramic Ring
Standard: Nonstandard, Standard
Ukukhiqiza: 200,000 sets/month
Indawo Yomsuka: Hunan
Isitifiketi: RoHS, REACH
I-silicon carbide ihlala emndenini owodwa we-ceramic, kodwa ubuso be-SiC uphawu lwe-ceramic bunobulukhuni obungcono kakhulu kanye ne-lubrication kune-aluminium oxide (i-Alumina). Kunezinhlobo ezimbili ze-silicon carbide, enye i-silicon carbide (SSiC) enamathela ngokuqondile, enye enye i-silicon carbide ehlanganisiwe (RBSiC) .I-SSi ingakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu nokucindezela kune-RBSiC.
Sinikeza ubuso obunjwayele futhi obujwayelekile obusindile be-ceramic ebusweni ekuboniseni ukukhiqiza okukhulu. Zonke lezi zinkimbiso ze-ceramic zisetshenziselwa kabanzi empompheni ehlukene yamanzi, ukukhiqizwa kwegesi kanye namafutha, amakhemikhali & petrochemical, ukuhlanzwa, amandla, imithi kanye nokunye.
Thina, ku-Jinghui Industry Ltd, uyisiqalo esihamba phambili sezakhi ze-ceramic eChina eminyakeni engaphezu kwengu-13.
Izindlela zokukhiqiza ezikhethiwe zifaka ukucindezela okumile, ukucindezela okushisayo, ukucindezela kwe-isostatic, ukufaka umjovo we-ceramic, i-extrusion ngokukhethwa kwezinsiza. Futhi, sinakho ukucubungula okucacile okucubungula nokuqhutshwa komshini wokukhiqiza. Efana nokuhlanganiswa, ukugaya, ukugaya okuhle, ukuchithwa kwe-CNC, ukunqunywa kwe-laser njalonjalo.
Imikhiqizo yekhwalithi iphuma ebucikweni bombuso wezinqubo zokukhiqiza, futhi idinga ithuluzi lokuhlola eliphambili. Imishini yokuhlola eyinhloko ihlanganisa i-CMM, iphrojekitha njll .
Ngomkhiqizo wethu onokwethenjelwa, isevisi yobuchwepheshe kanye nekhredithi enhle esungulwe namakhasimende, siye sithumela imikhiqizo yethu eYurophu, eNyakatho Melika, e-Asia, eNingizimu Melika, eNingizimu Afrika emazweni angaphezu kwama-50 .
Izigaba zomkhiqizo : IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces
I-electrical 96 alumina substrate ye-ceramic
I-SSiC Seal Ceramic Ring
I-Silicon Carbon Seal Ceramic Ring
I-SiC Seal O Ring